Ireo mpiaro seza tsara indrindra ho an'ny alika: karakarao ny fiaranao! | Tontolo alika
Tianay ny manao dia isan-karazany amin'ny alikanay. Noho izany, ny zavatra tena ahazoana aina indrindra dia ny fitondrana azy ireo ao anaty fiara, na dia izany aza dia mila mitandrina isika satria araka ny fantantsika dia tsy hijanona ny alika ary na hanao izany aza izy ireo dia azo antoka fa hameno volom-borona ny seza rehetra. Noho izany dia mila a mpiaro ny seza fiara ho an'ny alika.
Iray amin'ireo kojakoja fototra indrindra izay manamora ny fiainana ho antsika, rehefa mikarakara ny fanjakan'ny fiaranay. Raha tombony daholo! Androany dia ho hitanao izy ireo, fa koa ny zava-drehetra ny zavatra tokony ho fantatrao momba ireo mpiaro seza fiara, satria tianay ianao hisafidy ilay ilainao foana.
1 Ireo mpiaro seza tsara indrindra ho an'ny fiara
2 Ilaina ve ny mitondra mpiaro ny seza rehefa alaintsika ao anaty fiara ny alika?
3 Tombony amin'ny fampiasana fonony alika fiara
4 Karazana rakotra seza fiara ho an'ny alika
4.1 Sarona manerantany
4.2 Seza fiarovana
5 Tokony ho toa inona ny mpiaro seza fiara tsara
6 Aiza no hividianana mpiaro seza fiara alika
Ireo mpiaro seza tsara indrindra ho an'ny fiara
Ity misy safidy iray amin'ireo mpiaro seza fiara be mpampiasa indrindra ho an'ny alika hisorohana ny volo sy ny loto hafa tsy handoto ny fipetrahan'ny fiaranao.
Cover Dogs Car sy ...
Fanamafisana fiara Wimypet ...
Manenjika raharaha momba ny alika ...
Ilaina ve ny mitondra mpiaro ny seza rehefa alaintsika ao anaty fiara ny alika?
Ny marina dia ilaina na tena atolotra. Tsy mila mieritreritra an'io fotsiny isika rehefa manao dia lavitra, fa raha handeha hitsangatsangana miaraka aminy any ho any isika ary mila mandray ny fiara dia efa ho safidy tsara izany. Satria hanana ny toerany ilay biby raha mbola afaka miaina mora foana isika ary mbola mieritreritra ihany koa ny amin'ny fikarakarana ny fiarantsika. Ka vorona roa no vonointsika amin'ny vato iray eo amin'ny lafiny fampiononana ary koa fahadiovana.
Na dia etsy ankilany, misy olona maro izay aleony mampiasa ny mitondra na amin'ny seza efa natokana ho azy ireo ary apetraka mora ao anaty fiara. Fomba iray hahazoana antoka fa ho tonga lafatra ny fitondrana fiara, tsy misy fanelingelenana.
Tombony amin'ny fampiasana fonony alika fiara
Hanangona ny volo rehetra mety hianjera izany ary hanakana azy ireo tsy hifikitra amin'ny seza.
Manome fampiononana ho an'ny bibinay satria mazàna izy ireo dia misy mikasika malefaka na padding maivana.
Raha eny an-tsaha na eny akaikin'ny rano ny diabe miaraka amin'ny biby fiompinao, hisoroka ny loto ao anaty fiara ianao satria io no mahasarika azy.
Ankoatra izany, miaro ny fiara amin'ny hamandoana, manakana ny seza tsy ho simba.
Tsy manadino ny fofona. Satria mahazatra matetika izy ireo ary noho io antony io dia tsara kokoa ny mijanona ao anaty fonony toy izay amin'ny seza.
Tombony iray hafa ihany koa ny fisian'ny gorodona vitsy kokoa amin'ny fiara.
Matetika izy ireo dia manana paosy na kompartitra ahafahanao mitahiry kojakoja ilaina amin'ny biby fiompinao.
Karazana rakotra seza fiara ho an'ny alika
Izy io dia fonosana ifotony izay azonao apetraka tsara amin'ny seza. Tsy manadino fa misy ihany koa ny safidy ho an'ny vatan-kazo. Sarona malalaka izay tsy maintsy velabelarintsika mba handrakofana ilay faritra handehanan'ny biby fiompintsika. Fa eny, tsy maintsy tazonintsika tsara izy mba tsy hihetsika. Ho an'ity, mazàna izy ireo dia misy tadiny izay hapetaka amin'ny lohany. Ny maro an'isa koa dia manana andiam-baravarana izay ametahana fehikibo.
Wimypet tantera-drano ...
Raha tsy mila fonony feno ianao satria angamba ny alikanao kely kokoa na mahasosotra, dia tsy misy toa ny seza fiara. Karazan-seza iray fa hipetraka amin'ny sofa an'ny fiara ihany koa izany. Mitovy amin'ny seza zaza fa amin'ity tranga ity ho an'ny biby fiompintsika. Aza adino fa tsy maintsy tazominao tsara izy io ary raha vao mihazona izany ianao dia manana fehikibo miendrika fehin-kibo hitondra azy ireo koa. Amin'izany fomba izany dia hialantsika ireo fanelingelenana mety hitranga amin'ny kodiarana. Matetika izy ireo dia tantera-drano ary miaraka amin'ny famaranana ny harato mba hahafahan'ny rivotra miaina tsara kokoa.
Tokony ho toa inona ny mpiaro seza fiara tsara
mafy: Ny fanoherana rehefa miresaka momba ny biby dia tena zava-dehibe. Satria fantatsika fa tsy ny alika rehetra dia milamina ihany ary izany no hitadiavantsika fitaovana manohana ny fampiasana ary na ny volon-jaza aza. Ny ankamaroan'ny modely amin'ny endrika mpiaro seza fiara alika, tonga padded ary izany dia mamela azy hanana fanoherana tsara kokoa.
Tsy tantera-drano: Mba hialana amin'ny olana mety mahazo anao mandritra ny dia dia torohevitra foana izany alao antoka fa tsy misy rano ilay mpiaro. Tsy noho ny filanao ara-batana fotsiny, fa noho ianao afaka miditra ao anaty fiara miaraka amin'ny tongotrao mbola lena ary izany dia hiteraka hamandoana hijanona eo amin'ny seza, handoto azy io rehefa mandeha ny fotoana. Araka izany, ny zava-drehetra dia ho ao amin'ilay tranga tsy misy olana lehibe.
Misy lavaka handalovana ny fehikibo alika: Matetika izy ireo no mitondra azy io, satria amin'izay dia miantoka fampiononana bebe kokoa isika rehefa mandeha. Fa tsy maharary ny manome antoka fa eny misy lavaka na lavaka. Satria ho hita eo izay handalovana ny fehikibo na tohana izay hanohanana ny biby fiompintsika.
Miaraka amin'ny fameperana ny loha: Mba hisorohana ny fonony tsy hihetsika amin'ny fihetsiky ny fiara na ny biby fiompintsika, dia tsy maintsy manana karazana vatofantsika ihany koa izy ireo, amin'ny endrika tady lava, izay hapetaka amin'ny lohan-doha. Miankina amin'ny volon'ny fonony no ahafahan'izy ireo miraikitra amin'ny lamosina na amin'ny voalohany ihany koa.
Anti-taratasy kely: Ankoatry ny fieritreretana fonosana mora vadiana, malefaka sy mahatohitra na tsy tantera-drano, ary tsy hadinontsika koa fa tsy slip. Satria amin'ity fomba ity dia hataontsika izay hahazoana antoka fa tsy mihetsiketsika na mihetsika ny biby fiompintsika mandritra ny dia. Hahafinaritra kokoa azy io ary mazava ho azy, toy izany koa isika satria hifantoka bebe kokoa amin'ny làlana.
Aiza no hividianana mpiaro seza fiara alika
Amazon: Averina indray, Amazon dia manolotra antsika ireo karazana fonony na mpiaro seza fiara ho an'ny alika. Miaraka amin'ny famaranana maharitra, mora diovina ary hamolavola tanteraka ny fiaranao izany. Ankoatry ny filokana amin'ny fiarovana ary tsy amin'ny fonony voalaza ihany fa amin'ny seza famporisihana ihany koa.
kiwiko: Ny magazay manam-pahaizana manokana momba ny biby dia manome safidy tsara indrindra ho toy ny mpiaro feno izay hapetraka amin'ny seza, toy ny seza, hitondra ilay biby voaaro indrindra. Afaka mankafy zavatra maro azo atao arakaraka ny filanao ianao.
Decathlon: Ao amin'ny fivarotana fanatanjahan-tena par tsara indrindra dia namela toerana ho an'ny biby fiompinay koa izy ireo ary any no ahitanay karazana mpitatitra isan-karazany, mba hiarovana anay hatrany ny biby fiompinay.
Lidl: Ity supermarket ity dia mifidy kojakoja ilaina amin'ny trano sy ho an'ny biby fiompy foana. Ka amin'ity tranga ity dia azontsika atao ny mahazo fonony tsotra izay hisorohana ny volo amin'ny seza na handeha mivantana any amin'ny fonony tsy lafo vidy ho an'ny biby fiompy.
Carrefour: Carrefour dia manana iray amin'ireo fonony mora vidy indrindra ary misy tadiny ho fanohanana tsara kokoa. Na dia marina aza fa manana maodely maromaro izy rehetra ary samy manana fiafarana tsy tantera-drano sy mahatohitra izy rehetra. Inona koa no mbola angatahintsika?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Mpiaro seza fiara alika